Umaki: ngonyaka | Martech Zone
Yiso leso sikhathi sonyaka futhi… lapho kufanele ubeke eceleni isikhathi sokubuyekeza uhlelo lwakho lokukhangisa lonyaka. Unyaka olandelayo ungahle ubaluleke kakhulu kunanoma yimuphi unyaka owedlule ngokwamukelwa ngokushesha kwamaqhinga ezinkundla zokuxhumana. Nakhu engikuncomayo ukukuqoqa: Ukusetshenziswa Kwezentengiso ngeMedium - lena yimali yangempela ekhokhelwe imizamo yokukhangisa neyokukhangisa yangaphandle. Ukwephula lokhu ngaphakathi kwezigaba kubalulekile futhi. Ngamanye amagama, ungamane ubhale u-'intanethi '… ungene kwi-inthanethi